Jaamacadda Tarsus si ay si joogto ah u qorto | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaJaamacadda Tarsus waxay shaqaaleysiin doontaa si joogto ah
Si loo shaqaaleysiiyo shaqaalaha joogtada ah ee cutubyada Agaasinka Jaamacadda Tarsus, 657 / D ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka No. 4 / D, 4857 Sharciga Shaqaalaha iyo Xeerka Nidaamka iyo Mabaadi'da qorista Hay'adaha Dowladda iyo Hay'adaha waxaa lagu shaqaaleysiin doonaa X-NUMX.
Ogeysiiska ku saabsan jagooyinka joogtada ah ee shaqaalaha waxaa lagu baahin doonaa websaydhka IS-KUR inta u dhaxaysa taariikhaha 16-20.12.2019 iyo codsiyada musharraxiinta ku qancaya shuruudaha waxaa loo gudbin doonaa Agaasimeyaasha Gobolka ee Mersin / Xarumaha Adeegga shaqsi ahaan ama : www.iskur.gov.tr Waxay u baahan yihiin inay sameeyaan markay tahay.
Shaqo Xaaladda Shaqada Xaaladda Waxbarashada Tiri Habka Iibsiga
Amniga gaarka ah
Guard Normal / Joogtada Ka qalin jabiyay dugsiga sare
(Dugsi Sare iyo Iskuul u dhigma) 6 Muxaadarooyinka iyo Imtixaanka afka
a) No. 2527 waxay Dibadda Noble si xor ah Turkish ee Mihnadaha iyo Arts ee Turkey, Dadweynaha, Private ama ururada ganacsiga aan waxba loo dhimayn qodobada sharcigaan ku Run ku noqon kartaa muwaadin Turkish,
b) Dambiyada ka dhanka ah amniga Gobolka, dambiyada ka dhanka ah amarka dastuurka iyo ku shaqeynta amarkan, dambiyada ka dhanka ah difaaca qaran, dambiyada ka dhanka ah sirta dowlada iyo basaasida, lunsashada, musuqmaasuqa, laaluushka, xatooyada, khayaanada, ku xadgudubka kalsoonida, khayaanada musuqmaasuqa, xitaa hadii uu yahay cafis. in aan lagu xukumin dambiyo la xiriira lacag laaluush ama tahriibinta hantida ka dhalatay dambiga,
c) Aan lahayn xubinnimo, xubin xubinnimo ama kuxirid ama xiriir la leh qaab dhismeedka, qeybaha ama kooxaha ama ururada argaggixisada oo uu go'aamiyay Golaha Amniga Qaranka inuu ku kaco tallaabo ka dhan ah amniga qaranka ee Gobolka,
d) Inaadan la shaqeyn ururada ururada argagixisada, inaadan ka caawinin ururadaas, inay adeegsadaan ama u istcimaalaan kheyraadka guud iyo kheyraadka ay ku taageeraan ururradan, yaan lagu sameynin dacaayad ururadaas,
e) In aan laga xayuubin ku-dhaqanka xuquuqda aadanaha,
f) In aan lala xiriirin shaqada militariga (markii la qabtay, dib loo dhigo ama laga cafiyo),
g) Lacagta hawlgabka, da'da ama hawlgabka curyaannimada ee laga helo hay'ad kasta oo amniga bulshada ah
a) Inuu ugu yaraan noqdo dugsi sare iyo u dhiganta kuwa ka qalin jabiyay dugsiga
b) In si guul leh lagu dhammaystiro tababarka aasaasiga ah ee Amniga Gaarka ah iyadoo la raacayo Sharciga Lam. 5188 iyo in la haysto kaarka aqoonsiga amniga gaarka ah oo ay soo saartay Maamulka.
c) Inaad dhammaystirto da'da 18 sida maalinta ugu dambeysa ee arjiga, oo aysan ahayn inay heshay da'da 35, (oo dhashay inta u dhaxaysa 20.12.1984-20.12.2001)
TAARIIKHDA IYO Goobta
03 / 01 / 2020 on 10: 00 waxaa lagu qaban doonaa Hoolka Shirarka ee Jaamacadeena iyadoo ay jirto Nootaayo.
TAARIIKHAHA waraysiga iyo goobta
Musharaxiinta u qalma inay ka qeybqaataan wareysiga taariikhda, waqtiga iyo goobta wareysiga,https://www.tarsus.edu.tr waxaa lagu shaacin doonaa qaybta "Ogeysiisyada". Ku dhawaaqida websaydhka jaamacadeena waa dabeecada wargalinta mana jiri doonto wax ogeysiin ah oo ku saabsan cinwaanada dadka ay qusayso boostada. Murashaxiinta aan dalban ama aan waraysi sameynin taariikhaha ku xusan ogeysiiska waxaa loo qaadanayaa inay ka tanaasuleen xuquuqdooda oo ma sheegan karaan wax xuquuq ah.
1. Murashaxiinta xaq u leh in loo magacaabo natiijo ka dhalata codsigooda boosaska lagu dhawaaqay waxaa loo shaqaaleysiin doonaa shaqaale joogto ah sida ku xusan qodobada Sharciga Shaqaalaha ee 4857.
2. Shuruudaha waxaa lagu buuxin doonaa heerka Mersin Central iyo degmooyinka ku xiran iyo codsiyada kuwa deggan Mersin waa la aqbali doonaa ilaa maalinta lagu dhawaaqo.
3. Iyada oo la raacayo sharciga anshax marinta ee hay'adaha dowliga ah iyo ururada, codsiyada kuwa laga eryey jagooyinkooda ama xirfadooda lama aqbali doono.
4. Liisaska murashaxiinta, natiijooyinka bakhtiyaa-nasiibka iyo ogeysiis kasta oo kale oo ay fied-KUR ku ogeysiisay Jaamacadeena https://www.tarsus.edu.tr waxaa lagu shaacin doonaa ogeysiisyada ogeysiiska ”qeybta websaydhka. Lama ogeysiin qoraal ah loo sameyn doono musharixiinta kaqeyb qaadan doona isku aadka iyo musharixiinta la meeleeyay natiijada ka dhalatay isku aadka. Ka dib markaad wax badan ka sawirto liistada lagu dhawaaqay İŞ-KUR, dabaqa 4 waa la wareysan doonaa.
5. Musharixiinta aan lahayn u-qalmitaanka meelayntu sababtuna tahay meelayntu waxay sameeyeen been abuur, marin habaabin ama bayaano been ah iyo kuwa ku degay rabitaankooda looma magacaabi doono. Xitaa haddii la sameeyo, habraaca meeleynta waa la tirtiri doonaa oo haddii maamulku iyaga lacag ka siiyo, qaddarkaas waxaa lagu magdhabi doonaa danaha sharciga ah. Murashaxiinta aan soo gudbin dukumiintiyada looga baahan yahay waqtiga xaddidan inkasta oo ay yihiin shahaadooyinka iyo shuruudaha shaqaalaha lagu meelaynayo looma magacaabi doono howsha.
6. Tirada murashaxiinta looga baahan yahay in lagu beddelo kuwa aan la magacaabin ama kuwa aan la magacaabi karin maxaa yeelay waxay buuxin waayaan shuruudaha magacaabista waxaa laga go'aamin doonaa musharixiinta beddeli doonta. 10759 / 1-1
Çeşmeli - Mersin - Tarsus iyo Tarsus - Pozantı Motorway in
Ugaarsiga dayactirka dhismaha superstus-ka ee Çeşmeli - Mersin - Tarsus iyo Tarsus - Pozantı Motorway oyol
TÜVASAŞ in ay soo iibsato shaqaalaha joogtada ah
Shirkadda Gaadiidka TCDD 157 inay samayso shaqaale joogto ah
Qorista Joogtada ah ee Jaamacadda Tarsus